WAR-SAXAAFADEED KU SAABSAN BUUG CUSUB (AAN OOYEE ALBAABKA II XIDHA)
Written by Maamul on 30 March 2012. Waa buug cusub oo lagu ururiyey suugaantii gumaysi-diidka ahayd ee la curiyey waagii gumaystayaasha. Waa gabayo, geeraarro, masafooyon, heellooyin iyo jiiftooyin lagu cabbiray xaalado murug badnaa oo soo maray umadda Soomaaliyeed. Abwaanno kala duwan, wakhtiyo kala duwan iyo deegaanno kala duwan ayaa laga soo min-guuriyey suugaantan. Waxa ugu fac weyn suugaan la tiriyey 1891 oo ku beegnayd markii gumaysiga Talyaanigu soo caga-dhigtay xeebaha shabeellada dhexe. Sheekh Axmed-gabyow/Wacdiyow oo ahaa sheekh caan ahaa, haddana suugaanyahan ahaa ayaa isku deyey in uu af iyo addinba kaga hortago gumaystaha. Waxana ku jira suugaantiisii:
Soomaali aan u dagaalamaynaa,Dalkaan balaaran u daafacaynaa,Kufriga soo degay diida leenahay.Kuwa dulmaaya la dood gelaynaa,Dantiinii duul kale dhowrimaayeeHa daalinoo u dulqaata leenahay (1891)Waxana ugu dambeeyey Ibraahin Gadhle oo ka mid ahaa gobannimo doonkii Jabuuti. Bal u fiirso marka uu leeyahay:
Inkastoon ogsoonahay inaan, axadba waarayninWadka Eebe soo diro wax baa, aniga ii dheereIfka ruuxa joogaa kol buu, ku istareexaayeKol uun bay anfaaciga macaan, iligga saaraaneIkhtiyaar kol uun bay helaan, uumiyaa kale ehAasiya ba waxay leeyihiin aarmi iyo xoogeAnnagana Orobbaa sidii, awrta noo raraneWaagii iftiimaba kun baa, nalaga aasaayeBal qabsoo ugaadhiyo sidii, adhiga weeyaane (1970-naadkii)
Labadaas abwaan waxa u dhaxaysa qiyaastii 80 sano. Dabcan in ka badan 80 abwaan oo wada halgamaa ahaana way u dhexeeyeen. Waxa ka mid ahaa ninka maansadiisa loo doortay ciwaanka buuggan oo la odhan jiray Maxamed Ismaaciil Baasarce (Barkhadcas) oo xaalkiisu ku soo ururay 1958dii in uu oohin miciinsado. Waakii lahaa:
Look here in order to get an excellent possibility to get good written essays and make a difference in your student’s career due to our professional essay writing service.	May 20, 2013